Science of Love – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on 22 May 2010 18 October 2010 Categories Love & Marriage, Reproduction
6 thoughts on “Science of Love”
22 May 2010 at 8:03 pm
ဆောင်းပါးအတွက် ကျေးဇူးပါဆရာ။ ခုတလော ဖတ်မိတဲ့ သတင်းဆောင်းပါးတိုလေးတစ်ခုကိုလည်း ဝေမျှခြင်ပါတယ်။
Here’s why powerful men cheat
ကျွန်တော်ကလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာမ။ ဖတ်လည်း ပြီးသွားပါပြီ။ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကတော့ ပြောဖူးတယ်၊ ယောက်ျားတွေက ငွေရေးကြေးရေး အဆင်ပြေတဲ့အခါ အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်တတ်ပြီး မိန်းမတွေကျတော့ ငွေကြေးအဆင်မပြေချိန်မှာ ဖောက်ပြန်တတ်သတဲ့။ သူ့စကားကို စဉ်းစားကြည့်ဖူးတယ်။ ဖြစ်နိုင်ချေတော့ အတော်များသား။ ယောက်ျားတွေ ပြေလည်ချိန်မှာ ဖောက်ပြန်တာက ဆရာမရဲ့ လင်(ခ်)ထဲကအတိုင်း From an evolutionary perspective, men are here to sow their seeds—they desire more sexual partners and even lower their standards when it comes to one-night stands. ရယ်၊ Guys would naturally be more promiscuous if given the opportunity. ရယ်ကြောင့်ဖြစ်မယ် ထင်တယ်။ ရိုးရိုးပြောရင်တော့ ထကို ထချင်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မိန်းမတွေ မပြေလည်ချိန်မှာ ဖောက်ပြန်တာကတော့ အားကိုးရှာတဲ့ သဘောများလား မသိဘူး။ သုတေသနတွေ လုပ်နိုင်ရင်တော့ ကောင်းမယ်ဗျ။ လောလောဆယ်တော့ ဆရာမရဲ့ လင့်(ခ်)ကို Facebook မှာ တင်လိုက်တော့မယ်ဗျာ။ ကျေးဇူးအထူးပါခင်ဗျား။
တစ်ခုလောက် စဉ်းစားကြည့်ပါတယ် ဆရာ။ ဆရာကတော့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်တွေ အတော်များများ ညွှန်းဆိုလေ့ရှိပါတယ်။ အချစ်ဆိုတာ မဟုတ်ဘူး ဆန်ဆန် ပြောတာမျိုးလည်း သတိထားမိပါတယ်။ ဒါကို ငြင်းချက်ထုတ်တာတော့မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် တချို့တွေက နောက်တစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောဆိုရတာ ပိုပြီး ဓာတ်တည့်သွားလို့၊ သူ့ကို နားလည်နိုင်လို့၊ ဘာသာစကားတူသွားကြလို့၊ ဒါမှမဟုတ်လည်း ငယ်ငယ်ကထားခဲ့တဲ့ စိတ်ကူးစံတွေနဲ့ ကိုက်ညီသူကို အခုမှတွေ့ပြီ ထင်မှတ်သွားလို့ စတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်တွေကို အဓိကထားပြီး ငြိတွယ်သွားတတ်တာကို ကြားဖူးပါတယ်။ အဲဒီဖြစ်ရပ်မျိုး တွေ့ဖူးခဲ့ပါသလား။ ဒါမျိုးအတွက် ဆရာ့ထင်မြင်ချက်ကိုလည်း သိချင်ပါတယ်။ ဆရာပြောပြီးသားကို မဖတ်မိပဲ မျက်စိချော်သွားမိလို့ဆိုရင်လည်း ပြောခဲ့တာတွေကို ပြန်ညွှန်းပေးပါဦး။
22 May 2010 at 9:46 pm
အဲဗျ… အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ မပြောတတ်ဘူး။ ယောက်ျားတစ်ယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ အဲဒါမျိုး ကိုယ်တွေ့ ကြုံဖူးတယ်လို့ ရှက်ရှက်နဲ့ပဲ ဖြေရပါလိမ့်မယ်။ ဆရာမ ပြောသလို “နောက်တစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောဆိုရတာ ပိုပြီး ဓာတ်တည့်သွားလို့၊ သူ့ကို နားလည်နိုင်လို့၊ ဘာသာစကား တူသွားကြလို့၊ ဒါမှမဟုတ်လည်း ငယ်ငယ်ကထားခဲ့တဲ့ စိတ်ကူးစံတွေနဲ့ ကိုက်ညီသူကို အခုမှတွေ့ပြီ ထင်မှတ်သွားလို့စတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်တွေ”ကြောင့် ငြိတွယ်ချင်စရာ ဖြစ်ရပ်မျိုး ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဟိုတစ်ဖက်အတွက်လည်း ကျွန်တော်ဟာ အဲလို “စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်တွေကြောင့်” ငြိတွယ်ချင်စရာ “နောက်တစ်ယောက်” ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အတော်လေး ခရီးပေါက်လုနီးကျတော့မှ သတိတမံ ဉာဏ်မြေကတုတ်နဲ့ ကျွန်တော့်ဘက်က ချွန်းအုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော် ရှေ့မှာ တင်ခဲ့တဲ့ ပို့(စ်)ထဲကအတိုင်း လူဆိုတာ မတ်တတ်ရပ်နေတဲ့ သတ္တ၀ါဖြစ်တာမို့ ဦးနှောက်နဲ့ပဲ ရပ်တန်းက ရပ်လိုက်တာပါ။ သည်အတွက် နှလုံးသားကတော့ အလူးအလိမ့် ခံရတာပေါ့ဗျာ။ သို့ပေမယ့် အချိန်ဆိုတဲ့ သမားကျော်က ကုစားပေးလိုက်တာမို့ “အခုတော့ ပါးစပ် ရာဇ၀င်လေး တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပြီ”ပေါ့ ဆရာမရေ။
အဖြေအတွက် ကျေးဇူးပါဆရာ။ ဦးနှောက်နဲ့ ချွန်းအုပ်ချင်သူအတွက် “အချိန်ဆိုတာ အကောင်းဆုံးသမားတော်” ဆိုတာပဲ တစ်ခုတည်းသော အဖြေဖြစ်မှာပါ။ တကယ်လို့ ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲဖော်က သိသွားပြီး ဒီသဘာဝတွေကို နားမလည်သည်းမခံနိုင်ပဲ အကြမ်းကိုင်ခဲ့တော့မှ အချိန်တိုမှာ ရုပ်ပိုင်းအထိ တွန်းပို့သလိုဖြစ်သွားတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေလည်း မြင်ဖူးပါတယ်။ မိသားစုမပြိုကွဲဖို့ဟာ ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ခဲ့မယ်၊ ဒီကိစ္စတွေဟာလည်း ကုစားနိုင်တဲ့ ယာယီသဘောမျှသာ ဖြစ်ခဲ့မယ် ဆိုရင် ဒီလို “စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ” ငြိတွယ်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေမှာ လက်တွဲဖော်က ဘယ်လိုကိုင်တွယ်သင့်ကြောင်းကို ဇောင်းပေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်လောက် ရေးပါလားဆရာ။
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ စိတ်ကူးတော့ ရှိပါတယ်။ လက်က မရောက်နိုင်သေးတာပါ။ တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ ရေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်က ပိုရေးသင့်တယ် ထင်တယ်။ ကျွန်တော့် အိမ်သူဘက်က သိပ်အနေတတ်ခဲ့လို့သာ ကျွန်တော်တစ်ယောက် ချောက်ထဲကို စောက်ထိုးကျခါနီး တဲတဲကလေးအလိုမှာ ကိုယ်ရှိန် သတ်နိုင်ခဲ့တာကိုး။ သူသာ အကိုင်အတွယ် ကြမ်းခဲ့မယ်ဆိုရင် အခုလောက်ရှိ ကျွန်တော် ကောင်းကောင်း အမြီးပေါက်နေလောက်ပြီလေ။ သူ့ဘက်က အကိုင်မကြမ်းတာအပြင် နောက်တစ်ချက်က အိမ် “သာ”တာလည်း ပါမယ် ထင်တယ်။ ကျွန်တော့်အိမ်က သိပ်သာယာတယ်။ ပူညံပူညံ မရှိဘူး။ နေချင်စဖွယ်ကောင်းတယ်။ မိသားစုဘ၀လေးကလည်း ပျော်စရာကောင်းတယ်။ ကျွန်တော်က အဲသလို ခြေများစရာ အမှု မရှိရင် အိမ်ထဲက အိမ်ပြင် မထွက်ချင်တတ်သလို ဘီယာဆိုင်သွားတာမျိုးကအစ သူ့ကို အဖော်လုပ်လို့ရတယ်။ အိမ်မှာလည်း ကြိုက်သလို နေလို့ ရတယ်။ အဲဒါကလည်း အိမ်ထောင်ရေးဘ၀မှာ အရေးကြီးမယ် ထင်တယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က ယနေ့ထက်တိုင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တောင် မထိုင်တတ်တဲ့ ရှားပါး မြန်မာယောက်ျားထဲမှာ ပါနေလို့လားတော့ မသိဘူးခင်ဗျ။ ကျွန်တော့်အဖေကလည်း အလွန်အိမ်မြဲတဲ့သူဆိုတော့ အတုမြင် အတတ်သင်လည်း ဖြစ်ချင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အခု ပို့(စ်)မှာ ပါသလို ကယုကယင် နေတတ်ကြတာတွေကလည်း အချက်တစ်ချက်ဖြစ်နေဦးမှာပဲလေ။ အရေးကြီးဆုံးကတော့ “တန်ဖိုးထားမှုတွေ (values)” ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အခု လက်တန်း ရေးရင်းနဲ့တောင် ထည့်စဉ်းစားစရာတွေက တစ်သီကြီးပေါ်နေတယ်။ တော်တော်တော့ ရေးယူရမှာခင်ဗျ။
Previous Previous post: How to Love Somebody Thoughtfully